Takaitra navelan’ny Rivodoza AVA 36 no maty, 25 tsy hita popoka
Vola ratsy sy simba Miha mahazo vahana indray
Tsikaritra tato ho ato ny fahamaroan’ny vola ratsy mivezivezy eny an-tsena, eny amin’ny Taksibe ary hatreny amin’ny ireny Banky ireny.
Fampiasana finday mba handoavam-bola Ny 60 %-n’ny mponina eto amintsika no efa manao izany
Tsy mitsaha-mivoatra ny teknolojia eto amintsika. Anisan’ireny ny fampiasana finday izay zary efa lasa kilalaon’ny rehetra ankehitriny.
43 miliara ariary nivoaka tao amin’ny minisiteran’ny atitany Tsy marina, hoy ireo teknisianina
Anisan’ny resabe nitana ny sain’ny maro hatramin’ny fiandohan’ny herinandro teo ny fisian’ilay volabe mitentina 43 miliara Ar nivoaka an-tsokosoko teo anivon’ny minisiteran’ny Atitany mba hanampiana ireo ben’ny tanàna manerana ny Nosy.
Kaominina Alasora Tsy ahiana intsony ny tondra-drano
Anisan’ny kaominina nahiana mafy tamin’ny tondra-drano teto Antananarivo sy ny manodidina ny kaominina Alasora tamin’ny taona 2017.
Tetikasa 3P Youpi Water Park/ CUA Ho fanatsarana an’Antananarivo
Ho fanatsarana ny tanànan’Antananarivo dia mamaramparana ny fanamboarana ny toerana etsy amin’ny « avenue Cenam 67 ha Sud » ny Youpi Water Park izay tetikasa filamatra (projet pilote) azo atao amin’ny toerana malalaka rehetra.
Fikirakirana ny vaovao ara-pahasalamana Ampiasaina ny rindram-baiko DHIS2
Omaly no nampahafantarina tetsy amin’ny Hotely Ibis Ankorondrano ilay rindrambaiko (logiciel) ikirakirana ny vaovao ara-pahasalamana DHIS2 (District Health Information Software).
Vokovoko mena Malagasy sy Norveziana Tapitra hatreo ny fiaraha-miasa
Tapitra hatreo ny fiaraha-miasan’ny Vokovokomena Malagasy sy ny vokovokomena Norveziana. Niala tsy hanampy iretsy voalohany intsony mantsy ireto farany, raha araka ny fantatra .
36 ireo namoy ny ainy, 25 tsy hita popoka, 20 462 voatery nafindra toerana ary 136 005 traboina. Izay no tarehimarika farany navoakan’ny BNGRC vokatry ny fandalovan’ny rivodoza AVA.
Ny faritra Atsinanana, Analamanga ary Vatovavy Fitovinany no nisy fahavoazana goavana indrindra sy nahitana traboina betsaka indrindra. Mbola manohy hatrany ny fidinana ifotony sy fijerena ny zava-misy amina faritra maro manerana ny nosy ny ekipan’ny BNGRC, ampiasaina ny fiaramanidina sy ny drone ary ny elikoptera amin’izany ho an’ireo faritra kizo tsy tongan’ny fiara. Mitohy hatrany ny famonjena sy fanampiana ireo traboina sy niharam-boina rehetra manerana an’i Madagasikara. Eo amin’ny resaka fanampiana indray dia vary milanja 156 150 kg, legioma 72 100 kg, miampy karazan-tsakafo hafa narahan’ireo fitaovana ilaina ao an-dakozia sy ny trano lay, lamba firakotra, lay misy odimoka maro be no efa nozaraina tamin’ireo traboina miparitaka manerana ny nosy.